हामि दिनेछौ निर्मलालाई न्याए भन्दै आए जवान महिला प्रहरीहरु – Rastriyapatrika
हामि दिनेछौ निर्मलालाई न्याए भन्दै आए जवान महिला प्रहरीहरु
अब यी नया साहसी जवान प्रहरीहरु निर्मलालाई न्याए दिन आउने ; एक शेयर र लाइक अबस्य गरौ . नेपालका यी सुन्दर पुलिस महिलाहरु एक लाइक अबस्य गरौ
अब हामि दिनेछौ निर्मलालाई न्याए भन्दै आए जवान महिला प्रहरीहरु , हेर्नुहोस नेपालका टप महिला प्रहरीहरु जो निर्मला लाइ न्याए दिन योग्य छन्
शक्तिशाली व्यक्तिले जे गरेपनि हुने हो त ? बलात्कारी र हत्यारा जोगाउनेलाई बर्खास्त गरिदिएर पुग्ने ? गल्ती गर्दा पनि ठ्याँस्स लाएर कुर्सीमा बसिरहन लाज नहुनेहरु देखेपछि मर्यादाको केहि सीमा रेखाहरु तोडेरै भए पनि केहि भन्न मन छ । राज्य विधिले चल्छ कि दम्भ र शक्तिले ? कति मान्छेले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र हो यो । शहिदहरुको बलिदान र रगतको मुल्य यहि हो त ? शक्तिशाली व्यक्तिले जे गरेपनि हुने हो त ?
बलात्कारी र हत्यारालाई जोगाउनेलाई बर्खास्त गरिदिएर पुग्ने ? प्रहरी प्रमुख र गृह मन्त्रीको भनाइ चाँही के हो त ? अर्को स्टेप के ? एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई मुद्धा चलाउने ? त्यसपछि ? हत्यारा र बलात्कारी चाँही पत्ता नलगाउने ? यी प्रहरी अधिकारीहरुले कसलाई बचाएको भन्ने सामान्य प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि लाज क कस्ले मान्नु पर्ने हो यहाँ ?
ज्यानको खतरा छ, भनेर छानबिन समितिबाट बाहिरिन खोजेका उपसचिव खोइ कता छन् ? यति जाबो प्रतिवेदन बुझाउँदा ज्यान जान्छ कहि ? प्रमाण लुकाएका हुन् भनेर त हामीले घटना भएको हप्ता दिन पनि नबित्दै भनेका थियौँ । साराले भनेका थिए ।
त्यो निर्णय अदालतले गरिहाल्छ नि । भविष्यमा सरकारी सेवामा रहने की नरहने, जेल बस्नेकी, जेल बसे पनि कति वर्षपछि राष्ट्रपतिले माफी दिने र निकाल्ने, अथवा कुन मेडल छातीमा लगाइदिने भन्ने निर्णय लिखित रुपमा अहिलेनै लेख्ने त ? प्रहरी प्रमुख भन्छन् हत्यारा केहि दिनमा पत्ता लाग्छ, गृहमन्त्री भन्छन् केही दिनमै पत्ता लाग्छ, मन्त्रीहरु भन्छन्,् पानीमुनी गएपनि छोड्दैनांै ।
पहिला पक्रेर त देखाउनुस् अनि थाहा हुन्छ पानीमुनी गएपनि छोड्नेकी नछोड्ने । यो विषय चाडो भन्दा चाडो सेलाओस् भनेर कामना गर्नेहरुलाई निर्मलाको आत्माले सराप्छ । र त्यो पाप निर्मलाको सुरुवाल पखाले जस्तो सजिलै गरी पखालिदैन । कसैलाई जागिर बचाउनु छ, कसैलाई कुर्सी जोगाउनु छ ।
आफ्नो नालायकीपन लुकाउँदा लुकाउँदा १०० दिन कट्न आँट्यो के अब घटनाको दोषीलाई लुकाउन सफल भएकोमा १०० दिनको केक काटेर खाने ? अपराधको जगमा टेकेर राजा रजौटाको जहानिया शासन जस्तो व्यवहार गरेर गणतन्त्रको नाम भजाएर खान संकोच मान्नु पर्छ ।
कँहि जनतालाई घुटा टेकाएर आफु सिंहासनमा बसेर मुमा बडामहारानी बन्ने शोख । जनता जनताबीच पनि कोही विशिष्ट श्रेणीको जनता कोही सर्वसाधारण जनता भनेर ग्रेडिङ छुट्टाउँदै पदक दिदै हिड्ने शोख । कहि जनतालाई बाटैमा ट्याक्कै अड्याएर, हुइ हुई हुइ्र्र गरेर हलचल गर्न नदिइ बायु वेगमा हुइकिने दिन दिनैको र छिन छिनैको नाटक ।
जनताले जनताद्धारा जनतालाई नै गरे पनि शासन चाही यस्तो हुँदैन । जहिले पनि त्यसरी हुइकिनु पर्ने के काम हुन्छ हाम्रा मन्त्रीहरुको । २ पाइला छिटो घरबाट निस्के हुँदैन ?
राजै हुनु प¥या छ, रानी नै हुनु प¥या छ । गणतन्त्र जस्तो राम्रो व्यवस्था अर्को हुन्न सक्दैन होला तर गणतन्त्र नेपालका मन्त्रीहरुले राजा बन्ने सोख, त्याग्नु जरुरी छ । यसो कहिले काँही त बाटो हिड्दा, बस चढ्दा, मन्दिर, मस्जीद जाँदा बजार जाँदा मन्त्रीहरु सर्वसाधारणसँग भलाकुसारी गरेको भेटिउन् न ।
अन्याय, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, बलात्कार जस्ता कुनै पनि घटना हुँदा कुनै पनि मन्त्रीलाई केही नहुने हो भने जनताले सुशासन कहाँ खोज्ने, न्याय माग्न कहाँ जाने ? गरिब परिवारलाई न्याय दिन नसक्नेहरुले जागिर पचाउन र कार्यकाल सक्न मात्र खोजेको स्पष्ट देखियो, देख्नेलाई लाज भो । -न्युजट्वान्टीफाइभ